ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိသျှ သံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြမှု ~ Myanmar Express
မြန်မာ အတိုက်အခံတို့အတွက် အမြင်မရှင်းသည့်မေးခွန်းများ (၂)
မြန်မာ အတိုက်အခံတို့အတွက် အမြင်မရှင်းသည့်မေးခွန်းများ (၃)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် မေးခွန်း (၅၅) ခု
လွှတ်တော် အမတ် တစ်ဦး ဖြစ်ရန် အခွင့်အလမ်း သင့်တွင်ရှိသည်
ဒီလူတွေ၊ ဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်ရဲ့လား??
ကာတွန်း ကဗျာ သတင်း
၂၀၁၀ နှစ်ချုပ် သတင်းထူး ကဏ္ဍ
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ
စက်တင်ဘာတော်လှန်ရေးခေါ် ဘုန်းကြီးဆူပူမှု၏ ထူးခြားချက်များ
လက်အုပ်ချီ ရှိခိုးခြင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ဘုံပျောက်မှာစိုးကြောက်မိရှာ
ဘာသာပြောင်းမည်ဆိုသော လူပျက် ဇာဂနာ ဘာသာ နှင့် လူမျိုးကို ချစ်တတ်ပါစေ
ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များထဲမှ လူယုတ်မာတို့
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဇယား
စောင့်လေမျိုးနွယ် ဘာလဲဟဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်
ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ်
Foreign Media သြော် နိုင်ငံခြားမီဒီယာ
ရန်တိုက်၊ သွေးဖိုး၊ အကောက်ကြံသူများ စာရွက်ပေါ်မှ ခါချ
ဘာလဲဟဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဘာလဲဟဲ့ ရှစ်လေးလုံး
ဘာလဲဟဲ့ ABSDF ဘာလဲဟဲ့ FTUB ဘူး ရောင်းစားနေတဲ့ အတိုက်အခံများ
အလံ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံဆိုတာ
ဆိုင်းဘုတ်လေးတော့ တည့်အောင် မှန်အောင် ကိုင်ကြပါဗျာ
နားလည်ရခက်သော အလုပ်များကို အရှက်မရှိ လုပ်နေသူများ
နိုင်ငံတော်ကို ပြောင်းလဲချင်တာလား သူတို့ ဘဝ ကို ပြောင်းလဲချင်တာလား
မြန်မာ့အသက်အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ စုဝေးရာ ထူးဆန်းသော အဖွဲ့ကြီး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်လက်မဲ့ ၁၀၉-၁၁၀ တွေ အများကြီးရှိ အရှုတ်တော်ပုံများ
BHG ကို လူအများမကျေမနပ် ဖြစ်နေကြ
ပြည်ပမှာ ဒီမိုကရေစီရနေတဲ့ တို့ ရွှေမြန်မာတွေ
အတိုက်အခံ များရဲ့ အရှုတ်တော်ပုံများကို ဆက်လက်ဖွင့်ချမည် တွေ့ဆုံခြင်း
ပြည်ပရောက်မြန်မာများ အချင်းချင်းယုတ်မာနေကြဆဲ စိုင်းသိန်းဝင်း နဲ့ DVB သတင်းထောက် စောလဲ့နန္ဒာ အကြောင်း
နိုင်ငံခြားရောက်ရွှေများနှင့် LIVING TOGETHER ကိစ္စ မြန်မာအမျိုးသမီးများ သတိထားရမည့် ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား
မြန်မာမလေးများနှင့် ယမကာယဉ်ကျေးမှု့ 
နိုင်ငံခြား ရောက် မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေ
ဘာလဲဟဲ့ Eleven Media
အတိုက်အခံ များရဲ့ အရှုတ်တော်ပုံများကို ဆက်လက်ဖွင့်ချမည်
ဘာလဲဟဲ့ The Voice Weekly
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံဆိုတာ
အကျင့်ပျက် မီဒီယာများအား ဆုံးမနေသော Bkink Hacker Group
နိုင်ငံခြားရောက်ရွှေများနှင့် LIVING TOGETHER ကိစ္စ
မြန်မာအမျိုးသမီးများ သတိထားရမည့် ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား
"ဝ" ဒေသ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု
ဘာမှမထူးခြားသော ရက်/လ များ
နိုင်ငံရေးသမား မျက်ကန်းများ၊ အဘိုးကြီးများ နှင့် ဝီကီလိစ်
ဘာလဲဟဲ့ Burma Campaign UK
အရှက်မရှိတဲ့ သာကူး များ
မြန်မာ့အနုပညာသမိုင်းတွင် စတိုင်အထုတ်ဆုံး မင်းသား
ထိုင် နေရင်အကောင်းသား ထ သွားမှ ကျိုးမှန်းသိ
ဒီနေ့ဂွေးသီး မနက်ဖြန်ငှက်ပြောသီး NLD
အသုံးမကျတဲ့ ဒေါ်စု နဲ့ NLD
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အတွက် အမြင်မရှင်းသည့် မေးခွန်းများ
VIP Site များ
ဒေါ်စု သမ္မတ အလွန်ဖြစ်ချင်နေလျှင်
KIA နှင့် ပတ်သက်၍
၂၀၁၂ အတွင် စိတ်ပျက်ဖို့အကောင်းဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်
ဘုန်းကြီးများ ဆန္ဒပြခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍
မြန်မာနိုင်ငံအား ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကူးပြောင်းရန်အတွက် ဆယ်စုနှစ် (၂) ခု ခန့် အချိန်ယူ ကြိုးစားခဲ့ခြင်းကို
Myanmar Express နှင့် ပတ်သက်၍
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ အဖွဲ့အစည်း အတွင်းရေး ဖွင့်ချ ရေးသားခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍
ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိသျှ သံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြမှု
Myanmar Express Group
မြန်မာသတင်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ ဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း အမျိုးမျိုးလိမ်လည်ဖော်ပြကာ ဝါဒ ဖြန့်မှုများကြောင့် လန်ဒန်မြို့ အခြေဆိုက် ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဌာန ကို ရန်ကုန်မြို့မှ ပြည်သူများက ဒီကနေ့ ၁၄ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီ ခွဲခန့်မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကမ်းနားလမ်းရှိ ဗြိတိသျှ သံရုံး ရှေ့ တွင် ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်ကာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုတင် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း မရှိခြင်း နှင့် ကြိုတင် သိရှိထားခြင်း မရှိတာကြောင့် အချို့ ဆန္ဒပြလိုသူများ မလာရောက်နိုင်ဘူးလို့ သိရပြီး နောက်နေ့တွေမှာလည်း ဆက်လက် ဆန္ဒပြသွားဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ဆန္ဒပြသူ လူငယ်များဟာ KNU အတွင်းရေးမှူ ဖရိမန်းရှာ ရဲ့ သမီး ဇိုယာဖန်း နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးမြအေး ရဲ့ သမီး ဝေနှင်းပွင့်သုန်တို့ ဦးစီးပါဝင်နေသော Burma Campaign UK ကို ဆန့်ကျင်သော ဆိုက်ဘုတ်များကို ကိုင်ဆောင်ထားကြပါတယ်။BBC ၊ DVB အစရှိသည့် ပြည်ပ မီဒီယာများမှ ဘင်္ဂါလီနှင့် ပတ်သက်၍ ၀ါဒဖြန့်မှုများ ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန် စသည့် စာတန်းများ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်။မြန်မာတိုင်းရင်းသားများက ဗြိတိသျှ သံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြနေချိန်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဗြိတိသျှ နိုင်ငံ ခရီးစဉ်နဲ့ တိုက်ဆိုက်နေပြီး ပြည်တွင်းမြန်မာများက ဗြိတိသျှ ကို ဆန္ဒပြနေတုန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗြိတိသျှ က အမျိုးတွေနဲ့ တွေ့ဖို့ ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။Myanmar Express
Posted in: ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ်,သတင်း,မြန်မာ-ကုလား အဓိကရုဏ်းများ
14 June 2012 13:52
very good. protest every day for 1 week.if so, more protestors will come other days.
14 June 2012 14:45
Kill all bloody and dirty hell Bengali Rohingya Muslim.They are Evils and Parasites.We need to drive away out of Myanmar.
14 June 2012 16:46
လုပ်သင့် လုပ် ထိုက်သည့် ပြည်သူ့ တာဝန် ဒီထက်မက လုပ်သင့် ချေပသင့်တာတွေကတော့ နောက်ထပ် ပို၍ ဆိုးလာခဲံလျှင် ငွေစား bbc ဝန်ထမ်းများ ၊သစ္စာဖေါက် bbc ဝန်ထမ်းများ ၊ သတင်းတခုတခု အတွက်တိုင်းပြည်မှတိုင်းရင်းသားများကိုစော်ကားလျက်၊မြန်မာ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုစော်ကားလျက်ရှိသောbbc ဝန်ထမ်းများကိုသော်လည်း သူတို့၏မိသားစုများ ကိုသော်လည်းကောင်း ပြည်သူ့ စီမံချက်များ ချမှတ်ရန်လိုအပ်လာပြီဖြစ်၊ ဒါနဲ့ ကျနုပ်တို့လည်း သူတို့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ဆိုင်ရာများကို လက်စားချေ တုန့်ပြန်မှု့လုပ်ဖို့ စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းသိစေသည်၊၊
14 June 2012 17:32
Myanmar President U Thein Sein and NLD party leader Aung San Su Kyi must do step by step . ( 1) Must do Press conference and clearly tell all Myanmar people and UK, USA and World governments and world media that Rohingya is not Myanmar ethnic and Myanmar Nationality forever . There is no Rohingya in Myanmar and Bangladesh history. Bangladesh government and muslims named Muslims in Rakhine state to become Myanmar Ethnic. They are liars . There isastatement that Rohingya is not Myanmar ethnic in Myanmar Constitution. There must be have Muslim (Islam) control laws ( ban muslims immigrants, ban Mosque abd Islamic Koran books , muslim schools and Islamic centers , 1 Muslim for 1 Muslim wives and 1 Muslim kid ) in Myanmar Constitution . If so, Rohingya and World can't colonize Rakhine state and Myanmar.(2) Current Myanmar President U Thein Sein and NLD leader Aung San Su Kyi issue leagal statement that Rohingya is not Myanmar Ethnic and Myanmar Nationality. (3) Then deport all 700,000 Rohingya Muslims who don’t have National ID or have ID ( because Rrohingya bribealot of money to immigration officers in Myanmar Bangladesh border ) and Muslims from Rakhine state and Myanmar. Arrest and fine Myanmar immigration officers and hospitals who took bribe from Bangladesh muslims and issue Myanmar birth certificates and National ID to illegal Bangladesh muslims. (4 ) Then Establish good economy in Northern Rakhine state ( Bangladesh -Myanmar border ) and organize millions of Myanmar migrate to Northern Rakhine and Rakhine state. If so Myanmar and Rakhine people will be majority in Northern Rakhine and Rakhine state.World Rohingya , Saudi Arabia Government and Other Muslim country governments and World muslims bribe , lobby and give millions of money to BBC, British Government ( One of Current UK cabinet is Muslim ) and VOA and World media , UN, NGO who support Rohingya. So Myanmar government and opposition leaders and all Myanmar in World protest them. Arrest Pro Rohingya Myanmar muslims and pro Rohingya Myanmar muslims in UN, UNHCR, NGO in Myanmar.All Rakhine and Myanmar people must protest in front of Bangladesh Embassy, Saudi Arabia Embassy, British Embassy , British Consulate , and other pro Rhohingya and pro muslim country Embassies and Consulates in Myanmar about Rohingya.
Non Muslim governments in every country that have Muslim minority must issue Islam control laws ( ban Muslims immigrants, ban Mosque , Islamic Koran books , Muslim schools and Islamic centers , 1 Muslim for 1 Muslim wives and 1 Muslim kid and ban muslim and pro muslim representatives in government jobs ) because Muslim minority is like time bomb. Muslim live in host country quietly if their Muslim population is less than 50 % but Muslim will bully , behead and kill host country other non Muslims and make host country to Muslim (Islamic ) country like Pakistan , Bangladesh , Afghanistan , Indonesia , Malaysia , Egypt , Turkey and Muslim countries in North Africa if muslim population is more than 50%. There is no Rohingya in Myanmar and Bangladesh history. Bangladesh government and muslims named Muslims in Rakhine state to become Myanmar Ethnic . So Rohingya is real illegal Bangladesh Muslim. No doubt about it. Bangladesh Government want Myanmar to become Muslim country . So they don’t accept illegal 700,000 Bangladesh Rohingya muslims from Myanmar . Rakhine ( Arakan ) state and Myanmar will be muslim country if illegal 700000 Rohingys live in Rakhine state and Myanmar. These Rohingya s in Myanmar are real Bangladesh muslims. Bangladesh muslims invaded and insult Myanmar. They are liars .
14 June 2012 17:33
14 June 2012 17:34
14 June 2012 17:35
14 June 2012 19:13
ဆန္ဒပြ တာကို လုံးဝ ထောက်ခံအားပေးပါတယ်
14 June 2012 20:54
That's what we have to do. This is every myanmar citizen's duty!!!!
14 June 2012 22:19
BANGALI OR SO CALLED ROHINGYA OR KHAWTAW KALAR OR MUSLIM KALAR OR MUGYAHIDEN OR BANGLADESHI MUSLIM ARE NOT MYANMAR.WE ARE ABSOLUTELY OPPOSE THEM.RAKHINE OR ARAKANESE ARE TRULY OUR MYANMAR NATIONALITIES.
15 June 2012 14:28
What the hack is happening. Be cooperative and resolve the problem. People enraging and setting fire on religious matter. Be positive. Sit down and talk.
17 June 2012 07:14
Yes you are right Rohinghya are not in Myanmar ethnic groups, now are they demanding Myanmar government must aware about that, never say the oh poor Rohingya they are very dengerous future in Myanmar, All Myanmar nations should write to UN don't allow many Rohinghya are overseas it would be very defficult to control them when they will spread the kids 10-15afamily.
Comment ရေးသူများ သတိပြုရန် ~ Comment ရေးသားရာတွင် (အထူးသဖြင့် မြန်မာလို Comment ရေးသားရာတွင်) စကားလုံးများကို Space ခြားပြီးမှ ရေးပါ။ Space မခြားပဲ ဆက်တိုက်ရေးလျှင် Comment အပြည့်အစုံ ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၈၈၈၈ ၊ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ မှ ယနေ့ အဓိကရုဏ်း ကြီး/ငယ်၊ ဆန္ဒပြပွဲ ကြီး/ငယ် အတို့အထိ မီးလောင်ရာ လေပင့်ပေးသူများမှာ Update
MEG on Android
နေတိုးရဲ့ ရည်းစားဟောင်း အသက် ၁၄ နှစ်ကျောင်းသူလေး
Facebook ပေါ်တွင် ရှောင်ရှားရမည့် မိန်းကလေး အတင်းပြောသည့် ယောက်ျားများနှင့် မနာလိုကဲ့ရဲ့တတ်သည့် မိန်းမများ စာရင်း
မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာတွင် မြန်မာ့ရိုးရာအတိုင်း ချစ်သူနှင့် မင်္ဂလာဆောင်သည့် အဆိုတော် ရဲလေး
မြန်မာမိန်းကလေးအား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် သုံးဦးမှ မုဒိမ်းကျင့်ကာ ဓားဖြင့်ထိုးသတ်မှုအား ထူးချွန်သည့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမှ ညတွင်းခြင်း တရားခံများဖမ်းဆီးခဲ့
အဆိုတော် ရဲလေး၏ ဖခင်သေဆုံး သဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ထုံးစံအတိုင်း ရက်လည် ဆွမ်းကျွေး ရေစက်ချ တရားတော်နာ ပြုလုပ်ခဲ့
VOA နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် အပေါ် ရိုင်းပြခဲ့သည့် အတာ ဆိုသူ နှင့် မွေးစားသား တို့ဇတ်လမ်းအား ဖွင့်ချခြင်း (ဓာတ်ပုံ - ၁၂ ပုံ)
ပြည်မြို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ဓားထိုးခံရပြန်
မန္တလေး ပုသိမ်ကြီးတွင် မွတ်ဆလင်ကုလားက မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သမီးပျို (၁၆)နှစ်သမီးလေးကို မုဒိမ်းကျင့်၊ မန္တလေးသူတွေ သတိထားရမည့်အချိန်၊ မန္တလေးသားတွေ သွေးစည်းကြဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံ မုန်တိုင်းမကျမီ နှစ်ရက်အလို သူတို့ ဘာလုပ်နေကြလဲ?
အဖွားကြီး၊ အဖိုးကြီးများနိုင်ငံရေးမလုပ်သင့်ဟု ပြည်သူ့ချစ်သော ဦးခင်ညွန့် ပြောကြား
တရား လက်လွှတ် စကား အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြန်လည် တောင်းပန်သင့် (ပေးစာ)
ဘင်္ဂလီများအား မြန်မာ စစ်တပ် နောက်ဆုံးအကြိမ် သတိပေး
လိင်ကိစ္စကျန်းမာမှု အံ့ဖွယ်အကျိုး (၈)ပါး သိထားစရာ
အိမ်ဖော်အား ငှက်ပျောသီး ၊ ပုလင်းများဖြင့် အနိုင်ကျင့်ခဲ့သည့် ညီအမ ထောင်ဒဏ်ထပ်တိုး
တပ်မတော် နှင့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေး
အင်တာနက်မယ် နန်းခင်ဇေယျာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု နောက်ဆက်တွဲ နေတိုးရဲ့ ရည်းစားဟောင်း အသက် ၁၄ နှစ်ကျောင်းသူလေး
နမ်း ရမည့် ဇတ်ဝင်ခန်း ကို မရိုက်နိုင်၍ နှုတ်ထွက် သွားသော သက်မွန်မြင့် နေရာတွင် အနမ်း ခံလိုသော မြန်မာ sexy မင်းသမီး ဖွေးဖွေး သရုပ်ဆောင်မည်
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး မိုးပျံလမ်းပေါ်မှ ခုန်ချပြီး သေကြာင်းကြံပြန်
ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှ စိတ်ကြွဆေး နှင့် ကာမဆက်ဆံမှုလဲလှယ်
ရခိုင် ဒုက္ခသည်များ ရေသန့်၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ဆေးဝါး...
စစ်တွေ၊ မောင်တောနှင့် ကော့စ်ဘဇား သတင်း
ဘေးလွှတ်ရာကို ထွက်ပြေးရာမှ ဘူးသီးတောင်သို့ ရောက်ရှိ...
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသ UNDP တာဝန်ခံ ဒေါက်တာထွန်း...
မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ကို အပုပ်ချဆောင်းပါးဖြင့် ထိပါးစိ...
လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ထားသော်လည်း ဘင်္ဂလာ ရခိုင်များ ...
နောက်ဆုံးရ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဓာတ်ပုံများ (၁၆-၀၆-၂၀၁၂...
တရားမျှတမှု အလေးအနက်မရှိတဲ့ နော်ဝေက သတင်းထူး
KIA မှဆကားပါနဲ့ နော့လန်ရွာ တို့တွင်လူသစ်စုဆောင်း
ရေနံတင်ပို့မှု ပိတ်ပင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အီရန် မှ...
မျိုးချစ်စိတ်ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါအကြောင်း သင် သိပ...
Ytalk စနစ် အား ရတနာပုံ Call Center မှ ၀န်ဆောင်မှုပေ...
ရခိုင်အရေးအခင်းကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေရှ် နှင့် နယ်စပ်ကုန...
ကုလ အထူးကိုယ်စား လှယ် နမ်ဘီးယား စစ်တွေသို့ ရောက်ရှ...
မြန်မာနှင့် မွတ်ဆလင် တို့ အပြိုင်အဆိုင် ဆန္ဒပြ ကြ
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ လုံခြုံရေးသာမက ကူညီထောက်ပံ...
ယနေ့ ၁၅.၆.၂၀၁၂ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရားအနီးတ...
ကျပ်တစ်သောင်းတန် ငွေစက္ကူ စတင်ထုတ်ဝေ
စစ်တွေမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၄ ခု ကို တားမြစ်န...
၁၅-၀၆-၂၀၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နောက်ဆုံးရ ဓာတ်ပုံများ
စစ်တွေတွင် အိမ် ၇၀ ကျော် မီးရှို့ခံရပြန်
ရိုဟင်ဂျာ ထောက်ခံသူ ချိုတူးဇော် သို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစ...
စစ်တွေတွင် နာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲဖြစ်နေ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO) မှ မြန်...
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိက္ခ ကြောင့် လူ ...
၁၀၁ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရေးရာ အ...
စစ်တွေမြို့ကို မီးရှို့ရန်ကြံစည်သူများကို ထပ်မံဖမ်...
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ပြေးလာသော ဘင်္ဂလီမူဆလင်များကို ဘ...
ရုရှားနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အား ယူအီးအက်ဖ်အေက အ...
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမျိုးရေးပဋိပက္ခြ...
ကုလား - ရခိုင် အဓိကရုဏ်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
တုတ်၊ဓား၊ လှံ လက်နှက်များကိုင်ဆောင်ထားသည့် လူ ၂၉ ဥ...
ILO ဆန်ရှင် ရုပ်သိမ်းမှု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဘယ်လ...
ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကယ်ဆယ်ရေ...
ဒေါ်စုမိန့်ခွန်းမပြောခင်တစ်ရက်အလိုမှာ ကျင်းပတဲ့ ILO...
ဆူးကြားထဲ ဗူးသီးဖြစ်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်ကုလား မြအေး
ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာ အရေးအခင်းတွင် သေဆုံး၊ ပျက်စီး သတင...
ယနေ့ ၁၄.၆.၂၀၁၂ ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ မြင...
ရခိုင်သဟာယအသင်း(ရန်ကုန်) မှ ရခိုင်အသင်းအဖွဲ့များနှ...
မှတ်သားစရာကောင်းသော မိန်းမများ (ပေးစာ - ၁၅၀)
“ လူနည်းစု - လူများစု ” ခွဲခြားခြင်း၏အန္တရယ်
ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိသျှ သံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ...
အမေနုတ်ဆိတ်နေမှတော့ ရခိုင်တွေ မျိုးပြုတ်ပီပေါ့
ဗျိုင်းဖြူရွာမှာ ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ သတ်...
မြန်မာသုတေသီများအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံက နှစ်စဉ်ပညာသင်...
ရခိုင်ဒေသခံ ပြည်သူများ အတွက် လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ...
ဘာသာရေး ၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ
၁၄ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ရန်ကုန်မြို့ British Counc...
ဘီဘီစီ သို့ဒေါက်တာအေးချမ်းပေးစာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ရင်လေးဖွယ် စစ်တွေမြို့အခြေအနေ (ဗွီဒီယို)
၁၃-၀၆-၂၀၁၂ ရခိုင် သတင်းများ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နောက်ဆုံးရ ဓာတ်ပုံများ (၁၃-၀၆-၂၀၁၂...
စစ်မှု မထမ်းမနေရ စနစ် အမြန်ပြဌာန်းပေးပါရန်
ရခိုင်ဒေသတွင်း ပြဿနာများ မပြီးပြတ်သေးပဲ အလှူအတန်းမ...
ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဒုက္ခသည်များကို ...
အသားထဲကလောက်ထွက်သော ပြည်ပရှိ မြန်မာမီဒီယာများ
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ရခိုင်ပြည်နယ် ရေ...
စစ်တွေမြို့တွင် မီးရှို့မှုနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် တ...
နှစ်လခွဲအတွင်း ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်...
နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများ က ရခိုင်နှင့် ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ...
ကိုယ့်လူမျိုးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေသော သားကောင်း...
Several houses of Rakhine were destroyed by Bengal...
ဘင်္ဂါလီများက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သွေးထွက် ဒဏ်ရာရအောင်လုပ...
ရှိုးပွဲအတွင်း ဦးခေါင်း ထိခိုက်မိ၍ လေဒီဂါဂါ သတိမေ့...
ရန်ကုန်မြို့ရှိ YPI, Eleven နှင့် The Voice ဂျာနယ်...
ငွေကြေးဖောင်းပွမှု စိုးရိမ်ဖို့မလိုကြောင်း ဗဟိုဘဏ် ...
မွတ်ဆလင်များက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မီးရှို့မှု့ (ဗွီဒီယ...
ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများန...
၁၂ - ၀၆ - ၂၀၁၂ နောက်ဆုံးရ ရခိုင်သတင်းများ
ယနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဓာတ်ပုံများ (၁၂-၀၆-၂၀၁၂)
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ရခိုင်ပြည်နယ်ရ...
ရခိုင်ရှိ ဒုက္ခသည်များအတွက် အကူအညီ လိုအပ်နေ
မွတ်ဆလင်မ တစ်ယောက်မှ တောင်းပန်စာ (ပေးစာ - ၁၄၉)
၁၂.၆.၂၀၁၂ စစ်တွေမြို့၏ နောက်ဆုံးရသတင်း
ရိုဟင်ဂျာ များနှင့် Al Qaeda ၊ မြန်မာ သောင်းကျန်သူ...
ကုလား ရခိုင်အဓိကရုဏ်းမှ ပြည်ပကျူးကျော်စစ်ပွဲဖြင်...
အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းကြသူ ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများသို...
စစ်တွေ၌ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီများက အကွက်ချ လုပ်ဆောင်နေသည...
ရခိုင် အရေးကို အောက်ပါအတိုင်း သင် ကူညီနိုင်ပါတယ်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ၃၃.၇၀ ရာခိုင်နှုန်း တက္က...
ရခိုင် ဒုက္ခသည်များအား အစိုးရ နှင့်အတူ လှူလိုသူများ...
သည်နယူးယောက်တိုင်း(မ်)စ် သတင်းထောက် သောမတ်စ်ဖူလာ ၏...
စစ်တွေ ကန်တော်ကြီးရေ သောက်မိ၍ (၆) ဦးဆေးရုံတင်ထားရ...
မသင်္ကာသူ နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုဝန်ထမ်းအိမ်မှ လက်နက်မျ...
မောင်တောမြို့နယ် တစ်ခုလုံးရွာ သုံးဆယ်ကျော် မီးတိုက...
ဘူးသီးတောင်ရေကန်အား အဆိပ်ခတ်မည့် ဘဂါလီ နှစ်ဦး
သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစား အကြမ်းဖက် ဘင်္ဂလီများ
၁၁ ရက်နေ့ ည ပိုင်း ထိ နောက်ဆုံးရ ရခိုင်သတင်းများ
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းပဋိပက္ခများကြောင့် ဒေသတွင်း ဆက်...
ဗလီထဲတွင် ရိုဟင်ဂျာများ လူလက်နက်စုဆောင်းလျက်ရှိ
၁၁၊ ၀၆၊ ၂၀၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ် မှ နောက်ဆုံးရသတင်းများ
ယနေ့ ရခိုင် သတင်း ဓာတ်ပုံ ၁၀၀ (၁၁-၆-၂၀၁၂)
ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဇွန်လ (၁၁)ရက...
မောင်တောမြို့ ရွာသစ်ရှိ စသဇင်တည်းခိုခန်မီးရှို့ ဖျ...
ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာ အေးချမ်း၏ BBC သို့ ရိ...
ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေ (ဗွီဒီယို)
သတိထားရမည့် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းများ
၈၈ မျိုးဆက် မိုးသီးဇွန်း မွတ်ဆလင်များနှင့် ပူးပေါင...
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး၏...
ဖြုတ်ဦးနှောက်နဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန် ဘာလုပ်နေလဲ
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေ ခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁၂ နဲ့ ဆက်စပ် ၄၁၃ အ...
အရည်အချင်း မရှိသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်...
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ ကုလား-ရခိုင် အဓိ...
ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံးအား အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာ
မွတ်ဆလင် ရခိုင် အရေးအခင်း နောက်ဆုံးရ ဓာတ်ပုံများ
စစ်တွေမြို့အား ပုဒ်မ - ၁၄၄ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း
(၁၀၊ ၀၆၊ ၁၀၁၂) ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မှ မွတ်ဆလင် အြ...
အခြေအနေ ပိုဆိုးလာသော စစ်တွေက အကြမ်းဖက်မှု ဓာတ်ပုံမျ...
ရိုဟင်ဂျာတွေ ယုတ်မာချက်ကတော့ ကမ်းကုန်ပါဘဲ
စစ်တွေမြို့မှ NLD ဆိုင်းဘုတ်အားပြည်သူများမှ ဖြုတ်...
facebook သုံးစွဲကြသူများ အထူးသတိပြုမိကြရန်
သတင်းမှာများ ထုတ်လွှင့်နေသော မီဒီယာများအား သတိထားကြ...
စကပ်တိုဝတ်ပြီး အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အင်တာနက်သုံးမယ်ဆို...
သတင်း မီ ဒီယာ တန်ဖိုး ဆိုတာ
ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းကို မသိသေးသူများအတွက် မျှဝေလိုက်ပ...
ပြည်ပမီဒီယာတွေကို စနစ်တကျ တိုက်ဖျက်ဖို့ စစ်မျက်နှ...
စစ်တွေမြို့ခံတစ်ဦးဆီမှ ရရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ်နောက်...
ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာ၇ီ နောက်ဆုံးရ ရခိုင်ပြည်နယ်သ...
Subscribe to Myanmar Express Group
Myanmar Express Group သို့ စာမူ ပို့လိုလျှင် mm.exps@gmail.com သို့ လိပ်မူ ပေးပို့ နိုင် သည်။အယ်ဒီတာ ထံသို့ အကြံပေး၊ တိုင်ကြား လိုလျှင် editor@myanmarexpress.net သို့ ပေးပို့ နိုင် ပါသည်။
အစိုးရနှင့် ကေအိုင်အိုဆွေးနွေးပွဲ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် နမ်ဘီးယား တက်မည်
From : ..7day
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်ပြုလုပ်မည့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေ...
ခင်မွန့်တစ်ယောက် သူနှင့်လက်ထပ်ခါစက မိမိလောက် ကံကောင်းသူမရှိဟု ယူဆမိခဲ့သည်။သူ၏ အကြင်နာ အယုယများကြား။ ငွေကြေးချမ်းသာပြည့်စုံမှုများကြား သာယာနေမိခဲ့သည်။ မိဘ၏...
မိတ္ထီလာ လူသတ်မှု နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များချ
[image: Photo: မိတ္ထီလာ လူသတ်မှု နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များချ Tuesday, May 21, 2013 မိတ္ထီလာမြို့ အဓိကရုဏ်းတွင် ဘုန်းတော်ကြီး ဦးသောဘိတကို သတ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံ...
ရန်ကုန်တိုင်း ကြည့်မြင့်တိုင် မြို့နယ် အမှိုက်ပုံး အတွင်းမှ လက်နက်၊ ခဲယမ်းများ တွေ့ရှိ
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မေလ ၂၀ရက် ညနေ (၄)နာရီ(၁၀)မိနစ် အချိန် ခန့်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ဈေးကြီး အရှေ့ရပ်ကွက် ဗိုလ်သူရလမ်းနှင့် ပိတောက်ပင် လမ်းတွင်...
အူမကြီးကင်ဆာကို ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျနိုင်စေမည့် သဘာဝ အစား အစာများ
မေလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၃ အစိမ်းရောင် သဘာဝအပင်များ
Harvard တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာမှု အကြံပြုချက်အရ ဆလတ်ရွက် နေ့စဉ်စားသူတွေဟာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နှုန်း ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့...
တိုင်စာ၊ ပစ်စာ၊ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ၊ အကြံပေးစာ
ကျွန်းသစ်ခုတ်တာ ရပ်နားပါတော့ တပ်ဦးရေ (ပြည်သူ့အသံ)
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးမှ စီးပွါးရေးဥက္ကဌ ဒေါက်တာရွှေခါးသည် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွင် ချင်းလောပန်းထန်းရှိန်းနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကျွန်းသစ်များထုတ်လုပ်နေကြော...
မြန်မာဘုန်းကြီးတစ်ပါး အသက်ခံရတာကို ဘာမှ မပြောပဲ မွတ်ဆလင်များ အတွက် ၀မ်းနည်းကြောင်း ဒေါ်စုပြော..
ရခိုင်မှာ မြန်မာ မိန်းကလေး မှုဒိန်း အကျင့်ခံရတာ၊ မိတ္ထီလာမှာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ကုလားတွေ ရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံရတာတွေကို လျစ်လျူရှု့ပြီး မြန်မာနိုင်င...
မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို နိုင်ငံတကာက အလွန်အမင်းချီးကျုးခဲ့ဟု လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည်မှုအဖွဲ့ဝေဖန်
မနက်စောစော စီးစီးရေးစရာရင်တွင်းဖြစ်လေးပေါ်လာလို့ပါ ပြည်တွင်းစစ်မှာ လေယာဉ်သုံးခွင့်မရှိ Close Air Support ပြုလုပ်ခွင့်မရှိလို့ ဘယ်နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက...
ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ဒို့စစ်သားဘ၀ (အမှတ်တရ)
၀ါဆို၊ ၀ါခေါင်မှာ မိုးတွေ အရမ်းရွာတော့ မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင် ပင်လယ်၊ သမုဒ္ဒရာတွေအပြင် မြေကြီးမှာ ရွှေသီးပြီးစိုက်ပျိုးရေးကို အားထည့်ကြတော့ ကောက်...
အခုတော့ အမေစု လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ပြီ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကောင်းရာ ကောင်းကျိုးတွေကို လုပ်မယ်လို့လည်း ကတိသစ္စာတွေ ဆိုပြီးပြီ။ ဒီတော့ အမေစု အနေနဲ့ နိုင်ငံအတွက်ေ...
ဒွန်ဘန်ချောင်းကူးတံတားအား KIA မှ မိုင်းဖောက်ခွဲ
၀ိုင်းမော်- ချီဖွေကားလမ်းမှရှိတဲ့ ဒွန်ဘန်ချောင်းကူးတံတားကို မနေ့မနက် ၂နာရီခွဲလောက်တုန်းက KIA မှ လာရောက်
မိုင်းခွဲခဲ့သဖြင့် ကြမ်းခင်းမှာ ၅ပေ ပတ်လည်ပျက်စီးသ...
From : စိန်မေတ္တာ
ဒေါ်စုမိန့်ခွန်းမပြောခင်တစ်ရက်အလိုမှာ ကျင်းပတဲ့ ILO ညီလာခံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေရုပ်သိမ်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်
ILO lifts restrictions on Myanmar
The International Labour Organization has lifted its restrictions on the full participation of Myanmar in its activities...
အစိုးရက လမ်းအသစ်တွေဖောက် တံတားအသစ်တွေဆောက် ပြီး နိုင်ငံတိုးတက်အောင်တော့ သူတို့တက်အားသလောက် ဆောင်ရွက်နေတာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ အရင် ၁နှစ်လောက်အထိ ကျွန်တော်တို...
နိုင်ငံတော် အစိုးရသည် ပြည်သူလူထု လွယ်ကူချောမွေ့ စွာ ဆက်သွယ် သွားလာနိုင်ရေး အတွက် လမ်းတံတားများအား ဘဏ္ဍာငွေ မြောက်များစွ...
kia ကချင်သောင်းကျန်းသူများ ဒေသခံများ ထိခိုက်စေရန် ရည်ရွယ်
အေပြီ ၂၉ရက် နံနက် ၁နာရီခန့်က မြစ်ကြီးနား-နန့်စီးအောင်ရထားလမ်း မော်ဟန်ဘူတာအနီး မိုင်တိုင်အမှတ်(၆၁၆/၁) (၆၁၆/၂) တံတားအမှတ်( ၅၃၄) သံဘောင်ဘေလီ တံတားအမျိုးအစား အ...
[image: Photo] ကြည်နေ၀င်းမင်း အတွဲ (၁၀)၊ အမှတ်(၃၂) လစ်ဗျားခေါင်းဆောင်ဟောင်း မွမ် မာကဒါဖီအား သစ္စာခံ၍ နောက် ဆုံးခုခံနေသော မြို့နှစ်မြို့အနက် မှတစ်ြ...
ကျောင်းသားတပ်မတော်မြောက်ပိုင်းလူသတ်ကွင်း ၊ စစ်ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်နေသော KIA ခေါင်းဆောင်ကြီးများသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ အပိုင်း(၁)
မိဘကိုခြေစုံကန် ကိုယ်ကျိုးအတွက် သစ္စာဖောက်သင့်လား
မိဘတွေဘက်မှ အတွေးအခေါ်ရှိအောင် အပင်ပန်းခံ၊ ငွေကုန်ကြေးကျခံ၊ နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ပညာရပ်တွေ တတ်မြောက်အောင် သားသမီးများကို မေတ္တာလက်ဖြင့် ပေးဝေငှခဲ...
ကချင်ကို တိုက်တာကို အတော်များများအပြစ်မြင်ကြပေမယ့် ဝကိုတိုက်ဖို့တော့ အတော်များများ ပါးစပ်ပြင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဒီအချက်က ဝတွေရဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်တည်မှုဟ...
လူ့အခွင့်အရေးဖိုရမ် တက်ရောက်ရန် မစုစုနွေး ပြင်သစ်သုိ့ ထွက်ခွာ
တောင်သူလယ်သမားအရေးများ ဆောင်ရွက်နေသူ မစုစုနွေးသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊နတ်မြို့(Nantes)တွင် ကျင်းပမည့် ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အရေး ဖိုရမ...
Myanmar Local News (မြန်မာပြည်တွင်းသတင်းများ)
"မြန်မာဟာ သူ့နေရာကို သူပြန်ရပြီ"
အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ ညစာစား ပွဲမှာ သမ္မတကြီး မိန့် ခွန်းပြောပါတယ်။ မိန့်ခွန်း ပြော အပြီး မှာတော့ ဧည့်ပရိသတ်က သမ္မတကြီး သူ့ရဲ့စားပွဲကို ပြန်ရောက်...
မျောက်နှင့်လင်းယုန် ငိုပွဲဆင်၍ အမှိုက်ကောက်သူများ သင်္ကန်းဝတ်ပြီး ပြည်နယ်တောင်းသတဲ့လား
မျောက်ကလေးက လက်အငြိမ်မနေဘဲ ဟိုပစ်ဒီပစ် လျှောက်လုပ်တယ်။ လင်းယုန်ကြီးကလည်း ပါးစပ်က ပြောတော့သာ သံခင်းတမန်ခင်း၊ လက်တွေ့ကျတော့ ဒီလကုန်မှာ တိုက်ချင်းပစ် ပစ်ြ...
သဘာဝအလျောက် ကျက်စားနေသော တောယုန်များအား မိုးကြိုကာလတွင် အကောင်လိုက် ဖမ်းဆီးရောင်း ချမှု များလာ
[image: သဘာဝအလျောက် ကျက်စားနေသော တောယုန်များအား မိုးကြိုကာလတွင် အကောင်လိုက် ဖမ်းဆီးရောင်း ချမှု များလာ] မုံရွာ မေ ၂ဝ
စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ညောင်ပင်ဝန်းနှင့် ...
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်
[image: သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်]
မော်လမြိုင် မေ ၂ဝ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ ဖက်တန်းရပ်ကွက် စည်ပင်သာယာလမ်းရှိ ဖက်တန်းရပ်ကွက် အ...
မြန်မာ စစ်သား တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ သင်ကိုယ်တိုင် အဆင်သင့် ဖြစ်ပါရဲ့လား
ဒီမေးခွန်းကို လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်ကျော်ကာလက မေးခဲ့လျှင်တော့ အခြေအနေက တစ်မျိုးဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သို့ သော် ယနေ့တပ်မတော်ကို လူဟောင်းများက ဦးဆောင်နေခြင်း မဟုတ်တော...
ရောင်းစားခံရတဲ့ မြန်မာ ၇ ဦးကို ထိုင်းနဲ့ မြန်မာအဖွဲ့တွေ ကယ်တင်
ထိုင်းငါးဖမ်းလှေပေါ်ရောင်းစားခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၇ ယောက်ကို ထိုင်း လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ (AHTD) နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ရောက် မြန်မာ နို...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဌကြီး အဘ သူရဦးရွှေမန်းသို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာ
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဌကြီး အဘ သူရဦးရွှေမန်းထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ(၇)
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ရဲဘော်ရဲဘက်များရဲ့တူည...
မြန်မာ ဒုက္ခသည် ၅ သိန်းလောက်ကို ဆော်ဒီက နေထိုင်ခွင့်ပေးမယ်
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံက သမိုင်းဝင် လုပ်ရပ်တခုအနေနဲ့ မြန်မာပြည်ကလူ ၅ သိန်းနီးပါးကို ဒုက္ခသည်တွေ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီးနေထိုင် ခွင့်ပေးမယ်လို့ ဆော်ဒီ မင်းသား Kha...
ဘရာဇီးဘောလုံး အကျော်အမော်က သူ၏ချစ်သူကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ပိုင်းဖြတ်ကာ ခွေးကျွေးခဲ့ သည်ဟု ၀န်ခံခဲ့
ဘရာဇီး နာမည်ကျော် ဘောလုံး သမားတစ်ဦးက သူ၏ ချစ်သူဟောင်းမျာ သတ်ဖြတ်ခံ ခဲ့ရပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ပိုင်းဖြတ်ကာ ခွေးကျွေးခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်ဟု ၀န...
ကနေဒါနိုင်ငံရောက် ဒုက္ခသည် လူလိမ်
ကနေဒါနိုင်ငံကို ဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့ ရောက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားအမည်ခံ သူ့ကိုသူ တော်လှန်ရေး
သမားပါလို့ အမည်ခံထားတဲ့ လှိုင်ဘွား( http://www.facebook.c...
အောက်က ဝတ္ထုတိုလေးကို မှီပြီး Tie A Yellow Ribon Round An Old Oak Tree ဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ပေါ်လာခဲ့၊ ကြော်ကြားသွားခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ “အိမ်ပြန်လာ တေ...
ကေအိုင်အေအကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူတို့ထောင်ထားသော မိုင်းနှစ်လုံးပေါက်ကွဲပြီး အပြစ်မဲ့ အရပ်သားနှစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ၀ါရာဇွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရှဒူဇွတ်ကျေးရွာ အတွင်းရှိ ဒေသအခေါ် ၀ါခါးရွှေမှော်တွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် မောင်ကျော်လွင်(၂၂)နှစ်၊...
စာရေးဆရာကျော်ဝင်း သို့ ပြန်လှန်ဆွေးနွေးချက်
အင်းစိန်တောရကျောင်းနေဘက်ကိုကျော်ဝင်းရဲ့ “ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတွေးမိသည်များ” ဆိုတဲ့စာကိုဖတ်လိုက်ရတယ်။ ကိုယ်အသက်ရှင်နေခိုက် ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့စကားကိ...
ကျွန်တော့် ဘလော့ က ၂၀၁၃ နောက်ပိုင်း ပိုစ့်တွေ ကို FB က ဘလော့နေပါတယ် ... အဲ့ကြောင့် မို့ လို့ http://golden-land-myanmar-mm.blogspot.com မှာ ပြောင်းရွေ့ ဖတ်...
ရန်ကုန်မြို့တော် မြို့ပြတည်ဆောက်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမေရိကန်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ တရုတ်စသော ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လာရောက်ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ရန် ကြိုးပမ်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့ပြတည်ဆောက်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမေရိကန်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ တရုတ်စသော ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လာရောက်ရင်းနှီးလ...
မောင်မောင်မြင် ၏ အမေစုအတွက်မေးခွန်းတချို့
‘ပြည်ထောင်စုအရေးနှင့် အတွေးအမြင်များ’ အမည်ရှိစာအုပ် ထုတ်ဝေတယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားပြီး သွားကြည့်လိုက်တယ်။ ထုံးဆန်အတိုင်းပဲ သူတို့ပြည်နယ် သူတို့လူမျိုးစုအတွ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ် ပြန်လည်ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်) တွင် ကျရောက်မည်ဖြစ်သည်...
မဆဲ နဲ့ မပြောပါ... ဓာတ်ပုံကိုတော့ အားနာပါ
တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ တစ်ခုဟာ အလှဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ထက် အများကြီး တန်ဖိုးရှိပါတယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
တူနီးရှားမှာ ဘွဲ့ရ တစ်ယောက်က သစ်သီးရောင်းပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေတာက စတဲ့ အာရပ်နွေဦးလို ပြဿနာမျိုး ဖြစ်စေချင်လို့လား။
မြန်မာနိုင်ငံက ဘွဲ့တွေ တစ်ခုမှ မရခဲ...
မိထ္ထီလာ လူသတ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုများဖြင့် လူ ၇ ဦးကို ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်လိုက်
မတ်လအတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မိထ္ထီလာမြို့ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လူ ၇ ဦးအား ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်မှ ၂၈ နှစ်အထိ အသီးသီး ချမှတ်လိုက်သည်။
Myanmar Headline News
NLD ပါတီဝင်များ နှုတ်ထွက်ကြမည်
မေလ ၁၈ရက်နေ့ နေ့လည် ၂နာရီခန့်တွင် ပအို့ဝ်အမျိုးသားတပ်မတော်(PNA)မှ လက်နက်ကိုင်ဦးရေ ၃၀ ခန့် သည် ဒုတိယ အကြိမ် အဖြစ် တောင်ကြီးမြို့နယ် မောက်စံကျေးရွာရှိ အမျို...
NDF ပါတီမှ ပဲခူးမြို့နယ် စိုင်တီကျေးရွာသို့ သောက်သုံးရေသွားရောက်လှူဒါန်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ ပဲခူးခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးညိုလင်းမောင် ဦးဆောင်သည့် NDF ပါတီအဖွဲ့သည် ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ
ပီအာအကြောင်း ပြောကြည့်တာပါ အပိုင်း(၂)
ပီအာဆိုတဲ့ အချိုးကျကိုယ်စားပြုမဲပေးစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းမသိကြဘဲ ရှိတဲ့ပါတီ အားလုံး အချိုးချပြီး အမတ်နေရာပေးရမှာလို ဆိုသူကဆို၊ တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ ...
ကွန်ပျူတာဖြင့် “ခြင်” နှိမ်နှင်းနည်း
တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခြင်ဆေးခွေ နဲ့၊ ခြေဆေး ရည်ဘူး အနံ့များနဲ့ ခြင်ကို နှိမ်နှင်းတာ ထက်စာရင်အများကြီး အကျိုးရှိတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပို...
လက်ပတောင်းတောင် ဒေသမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆန္ဒပြဖို့ လှုံဆော်သူများ တွေ့ပြီ
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်သားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်၊ မြအေး နှင့် အပေါင်းပါများ ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်(ရန်ကုန်)မှဟန်ဝင်းအောင်၊အောင်စိုး ကျောင်သားသမဂ္ဂဖြစ်မြောက...
ပထမ. . . သူတို့ သမ္မတကြီးကို မကောင်းရေးတယ်။ ကျုပ် . . ဘာမှ တုန့်ပြန်ရေးသားတာ မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ကျုပ်က သမ္မတမှ. . . . မဟုတ်တာ။
နောက်တော့. . . သူတို့ ကာချုပ်ကိ...
ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင်ဆီသို့ ဒုတိယအကြိမ် .......
KIO ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ မြန်မာအစိုးရပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ တို့ကြား မတ် လဒုတိယပတ်လောက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေ ထပ်လု...
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးသူရရွှေမန်း မြစ်ကြီးနားသို့ရောက်ရှိ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးသူရရွှေမန်း နှင့် အခြား တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်အမတ် များ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်နေ့ တွင် မြစ်ကြီးနားသို့ လေ့လာရေးခရီးအနေနှင့် ရောက်ရှိခဲ့သည...
ဒါမျိုးကျ လူအခွင့် အရေး အော်ကြပါဦးလား အပေါင်း အပါတို. ရဲ..3months ago
နိုင်ငံတော်သမ္မတအရပ်ဖက် လူထုအခြေပြု လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ၈၀ ကျော် နှင့် တွေ့ဆုံ စဉ် ပြောကြားသော သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်း
ယခုလို အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ မိမိတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အနေနဲ့အတူ ကြိုးပမ်းရယူထားတဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်ထွန်းမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီး...
ဤရက်ပိုင်းအတွင်း ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား၏အမည်သည် ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှားများ ၊ လူမှုကွန်ယက်များ ၊ သတင်းမီဒီယာများတွင် အတော်ပင်ပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါသည် ထိုပြန့်နှံ့မှုသည် ...
အင်္ဂါဂြိုဟ် တွင် ရေ သဲလွန်စ တွေ့ရှိ
အင်္ဂါဂြိုဟ်တွင် စူးစမ်းမှု ပြုနေသည့် Curiosity ဂြိုဟ်ဆင်းယာဉ်မှာ လွန်ခဲ့သည့်နှစ် သန်းထောင်ပေါင်း များစွာက ရှိခဲ့သော် ရှေးခေတ် မြစ်တစ်စင်း၏ ကြမ်းပြင်ပုံစံက...
as I suspected,
it's overwhelmingly olive-green,
the color of the Burmese tatmadaw
i might be prejudiced to think that way.
after all, aren't all orchid s...
မြစ်ကြီးနားမြို့ မြို့သစ်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ ဂျန်မိုင်ကောင်နှစ်ခြင်းဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဂျန်မိုင်ကောင် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ KIA တပ်ဖွဲ့မှ တပ်...
ခေါင်းစဉ်ကိုက ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ယနေ့ပြုမူလှုပ်ရှားပြောဆို လုပ်ကိုင်မှုတွေ အပေါ် တပ်မတော်သားတစ်ဦးရဲ့ ရိုးရိုးသားသား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း...
02:01 Myanmar Express Group3comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးစီး မြန်မာအတိုက်အခံများအားလုံး အားကိုးနေသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သိက္ခာကတေ...
1. လူသည် နိုင်ငံရေး သတ္တဝါဖြစ်သည်။
Human is political animal. (Aristotle)
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒဿနိကများ နေရာတွင် နိုင်ငံရေးများ ဝင်ရောက်နေရာ ...
ဒါကတော့ ကိုရဲထွန်းတို့ပါတီရဲ့ အလံ နဲ့ တံဆိပ် ဖြစ်ပါတယ်။NLD ရဲ့ အလံ နဲ့ တံဆိပ်တို့ကို ကန့်ကွက်ချင်ရင် ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ကြော်ငြာ...
- အော်ကြမယ်၊ ဖော်ကြမယ်-၁ (ကျောင်းသားများအား ခေါင်းဖြတ်သတ်သူ လူသတ်တရားခံ) click - NLD မှနိုင်ငံရေး နားမလည်ခဲ့သူများ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြိုင်မည် ...
Myanmar Daily Mail Google Group
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တိုးတက် ပြောင်းလဲလာမှုကို အာဆီယံကကြိုဆို ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်လာပြီးနောက် မြန်မာအား ဂျပန်နိုင်ငံ၏ တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီ(ODA) အပြည့်အ၀ ပြန်လည်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲများ မြန်မြန်စချင်ကြောင်း
1. မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တိုးတက် ပြောင်းလဲလာမှုကို အာဆီယံကကြိုဆို ၊ 2. မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်လာပြီးနောက် မြန်မာအား
ဒီမိုမီဒီယာများ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် အမျိုးသားရေး ရောမချ ရန်.. စစ်အစိုးရဆန့် ကျင်တာနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ကို မြန်မာနိုင်ငံထဲ သွင်းတာ ရော...
Copyright © 2011 Myanmar Express | Powered by Blogger